Shaakir dekedda Hobyo ma maqli karo miyaa? | KEYDMEDIA ENGLISH
Shaakir dekedda Hobyo ma maqli karo miyaa?
Shaakir, sida cad wuxuu meel iska dhigay kitaabadii cilmiga, wuxuu duullaan ku yahay jiritaanka Galmuug, wuxuu la dagaallamayaa Dowladda Soomaaliya, wuxuu noqday wadaad hubeysan oo qori caaraddiis ku doonaya xukunka.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Labo maalin ka hor, wafti uu hoggaaminayo, Wasiirka Dekadaha Galmudug, Xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye, oo ay qeyb ka yihiin, qaar ka mid ah xildhibaannada labada Gole ee baarlamaanka Federaalka, ayaa gaaray magaalada Hobyo, si loo daah-furo mushruuc lagu hormarinayo dekedda.
Hayeeshee, markii uu soo if-baxay, warka sheegaya in ganacsato reer Galmudug ah oo ku midaysan shirkadda Hobyo Port and Development, u istaageen dhismaha deked dhameystiran, waxaa soo kordhay culeys amni, oo ka yimid dhanka Kooxda Ahlusunna oo fadhigeedu yahay degaanka Bohol.
Kooxdaan oo uu hoggaamiyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, ayaa saddexdii maalin ee la soo dhaafay si joogto ah u wadday falal xooggan oo liddi ku ah amniga Galmudug, waxayna billaabeen abaabul ciidan iyo hub aruursi hor leh.
Shalay waxa ay gubeen mid ka mid ah gawaarida Madaxtooyada halka ay mid kale qabsadeen, waxayna dileen ku dhawaad 10 askari, kadib markii ay waarar dhabo-gal ah, ku qaadeen ciidan ka tirsan Guutada 15-aad ee qeybta 21-aad.
Sida ay Keydmedia Online, u xaqiijiyeen, saraakiil ka tirsan ciidanka Galmudug, maamulka Axmed Qoorqoor, ayaa ku baraarugsan, in ASWJ isku diyaariyso duullaan ay ku qaadaan magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb, bisha Ramadaan.
Hayeeshee, is weydiinta ayaa ah, mar kasta oo miiska la soo saaro mashruuc lagu hormarinayo Hobyo, maxay abaabul ciidan iyo colaad, Galgaduud iyo Galmudug uga huriyaan Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir?
Maaxamed Shaakir oo xilli ahaa sheekh caan ah, aadna looga jecelaa gayiga Soomaalida oo dhan, ayaa ugu danbeyn u muuqda kutubo xoor aakhiro sheeg ah, kaas ku gambashada diinta ku daadinaya dhiigga reer Galmudug, si uu u helo xukunka.
Dhowr jeer, waxaa Shaakir iyo Maxamuud lagu eedeeyay in ay siyaasiyiin fadhigoodu yahay Garawe, uga shaqeeyaan, daadinta dhiigga, burburnta degaanka, barakicinta danyarta iyo baabi’inta nidaamka dowladnimada Galmudug.
Si aan qarsoodi lahayn waxaa dhaawacyada ciidankiisa daaweysa Puntland, isla-markaana siisa hubka iyo rasaasta uu ku dhibaateynayo Galmudug, Puntland, waxa ay muddo fog ka soo hor jeedday dhismaha Hobyo oo markaan qalabka loo qaatay.
Marka la eego, colaadaha uu hurinayo, marka la soo hadal qaado hor-marinta Hobyo, waa loo qaateen in Shaakir, fulinayo danaha kooxo gaar ah oo yoolkoodu yahay in xasilloonudu ka saahirto Galmudug, xasaradna ka aloosnaato Mudug iyo Galgaduud.
Duullaanki uu ku qaaday Guriceel, October 2021, waxaa ku dhintay saraakiishii ugu mihiimsanaa ciidanka ka howlgala Galmudug, sida Taliyihii Ciidanka Danab ee Galmudug iyo hoggaan kale oo muhiim ah, halka uu qaxiyay in ka badan 100,000 oo shacab ah.
U jeedkiisu wuxuu ahaa in aysan doorasho ka dhicin Dhuusamareeb, maamulkuna ka cararo Caasimadda, mar kale, wuxuu doonayaa inuu carqaladeeyo amniga degaannada si uusan u hirgalin qorshaha dhidibada loogu taagayo dekedda Hobyo.